Sekoly 40 amin’ny Cisco efatra : entanina ny mpianatra hisoroka ny herisetra | NewsMada
Sekoly 40 amin’ny Cisco efatra : entanina ny mpianatra hisoroka ny herisetra
« Natomboka teny amin’ny EPP Antanimena II ny tetikasa Sahala mikasika ny fanentanana ny mpianatra eny amin’ny sekoly ambaratonga voalohany fototra momba ny miralenta sy ny fihetsika tsy misy herisetra. 40 ny sekoly iarahana miasa, 20 EPP, ny 20 ambiny sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana nanaiky ny asa fanentanana ny mpianatra amin’ny Cisco efatra », hoy ny fanazavan’ny mpandrindra ny CforC, Sariaka Nantenaina, omaly teny Antanimena.
Miendrika lalao ny fanentanana ny mpianatra hoentin’ny mpanentan’ny tetikasa Sahala eny anivon’ny sekoly. Mandritra ny fialan-tsasatra, hiofana ireo mpampianatra ka hitohy amin’ny taom-pianarana vaovao ny hetsika. Hizarana fitaovana koa hanamorana ny fanazavana. Miompana amin’ny lohahevitra telo ny fanabeazana : miralenta, fihetsika tsy misy herisetra ary ny fihetsiky ny lehilahy tsy maneho herisetra. Mandritra ny ora roa ny fanentanana any an-dakilasy. Tafiditra amin’ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona ny fanentanana iarahana amin’ny minisiteran’ny Fanabeazana mba hisitraka azy avokoa ny EPP rehetra. 10 ny fokontany iasana ary saika eny anivon’ireo no misy ny sekoly (Soarano, Tanjombato, Sabotsy Namehana, Analamahitsy…) itondrana ny fanentanana. Amin’ireo fokontany ireo, manodidina ny 65%-n’ny tokantrano, ahitana herisetra avokoa ary misy ny sokajin’olona rehetra.
Manohana vola ny tetikasa ny Vondrona eoroperanina amin’ny tetikasa demokrasia sy ny zon’olombelona.
Une réponse à "Sekoly 40 amin’ny Cisco efatra : entanina ny mpianatra hisoroka ny herisetra"
Rakotoarisoa Maminiaina 16/06/2017 à 14:38
“zaro @lalana tena izy ny ankizy, ka na lehibe aza izy tsy miala @izany”, enga anie mb hitondra voka-tsoa tokoa izany.Na izany aza tsy tokony ho hadinoina fa matoa ny olona iray mahery setra dia satria lehibe tanaty tontolo mahery setra.Mirary soa tompoko